Facebook ပေါ်မှာ အရမ်းဟော့နေ တဲ့ ပုံလေး ရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ ရဲရင့်မှု တွေပါတဲ့ မျက်ရည်ဝိုင်းရတဲ့ အဖြစ်မှန် – Let Pan Daily
Facebook ပေါ်မှာ အရမ်းဟော့နေ တဲ့ ပုံလေး ရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ ရဲရင့်မှု တွေပါတဲ့ မျက်ရည်ဝိုင်းရတဲ့ အဖြစ်မှန်
မူရင်းဓါတ်ပုံ ပိုင်ရှင် ကို Thiha Tun ရိုက်တဲ့ပုံလေး အရမ်းကြိုက် လို့ သိမ်းထားတာ ၃ နှစ်လောက် ရှိခဲ့ပြီ…
တွေ့တွေ့ချင်း လှောင်ပြီးဟား တိုက်ရယ်မိတယ် ….ဒီလောက်ရူးရသလားပေါ့…. ပြီးမှကြည့်နေရင်းကြည့်နေရင်းနဲ့ မရယ်ရက်တော့ပဲ မျက်ရည်ဝိုင်းလာမိတယ် ….. ။ အဲ့ကောင်မလေးနေရာ မှာ ကိုယ့်ပုံရိပ်ကို ပြန်တွေ့လိုက်ရသလို ၊အဲ့ကောင်မလေးနေရာမှာ အမျိုးသမီးတော်တော်များများရဲ့ပုံရိပ် ကို ပြန်တွေ့လိုက်ရသလို ခံစားမိလိုက်လို့ ပါပဲ ။ ကိုယ်တို့မိန်းမတွေ ရဲ့ မိုက်ရူးရဲဆန်မှု ၊စွန့်စားမှုတွေ ကိုအဲ့ဓာတ်ပုံထဲမှာ ပြန်မြင်နေရသလိုခံစားမိတယ် …. ။
ကိုယ်တွေက ကိုယ့်ကိုလှမ်းဆွဲတဲ့လက်တစ်စုံကို ယုံကြည်မိတဲ့အခါ ၊ စွန့်စားရဖို့မကြောက်တော့တဲ့ကမ္ဘာ့သတ္တိအရှိဆုံးလူသားတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်။ ဒီလက်တစ်စုံဟာကိုယ့်အတွက် အလုံခြုံဆုံး စောင့်ရှောက်မှုကိုပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တကြီး ရူးမိုက်ခဲ့ကြတယ် ….. ။ ဒီလက်တစ်စုံဟာ ကိုယ့်အတွက် မေတ္တာတရား အပြည့်နဲ့ ဖေးမလိမ့်မယ်လို့ အားကိုး တကြီး ယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီလက်တစ်စုံသာ ရှိရင်အရာရာရင်ဆိုင်ရဲပြီဆိုတဲ့ သတ္တိတွေနဲ့ လောကကြီးကို စိန်ခေါ်ခဲ့ကြတယ် …… ။
ကိုယ်ဆွဲမိတဲ့ လက်တစ်စုံဟာကိုယ့်ကို ဖေးမစာနာပြီး တွဲခေါ် စောင့်ရှောက်တဲ့လက်မျိုး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ရင် ဘယ်လောက်ပဲပင်ပန်းပါစေ ပျော်မဆုံး၊မော်မဆုံး ၊ကြည်နူးမဆုံးနဲ့ နှစ်ကိုယ်တူဘဝခရီးလမ်းကိုရင်ဆိုင်လျောက်လှမ်းနိုင်စွမ်းတွေရှိခဲ့ကြတယ် ….. ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တွေ လှမ်းဆွဲခဲ့တဲ့လက်တစ်စုံက ကိုယ့်လက်တွေကိုမြဲမြဲမတွဲ ထားနိုင်တဲ့ အခါ ၊ကိုယ် လှမ်းဆုပ်ခဲ့တဲ့လက်တစ်စုံမှာကိုယ့်အတွက် စာနာဖေးမမှုတွေ၊ မေတ္တာတရားနဲ့စောင့်ရှောက်မှုတွေ၊ တာဝန်သိတတ်မှုနဲ့ ငဲ့ညှာ သနားမှုတွေ ပျောက်ဆုံးလာတဲ့အခါ ….
ကိုယ်တို့မိန်းမတွေဟာ ပုံထဲကမိန်းခလေးလို ခြေကားယား လက်ကားယား နဲ့ လောကအလယ်ကို့ယို့ကားယားဖြစ်ကြရတော့မှ အိပ်မက်ဆိုးကနိုးလာသလို ကိုယ်တွေ ယုံကြည်မိခဲ့တဲ့လက်တစ်စုံကို ကယောင်ကတမ်းလိုက်ဖမ်းရင်း အလဲလဲအပြိုပြို ဖြစ်ကြရတဲ့ သူတွေရှိသလို ….
ဆွဲထူမယ့်လက်တစ်စုံ မရှိတော့တဲ့ အခါလဲ ငါသန်မာမှဖြစ်မယ်၊ငါ ရပ်တည်မှဖြစ်မယ်၊ ငါကြံ့ကြံ့ခံအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်မယ်၊ငါ တစ်ယောက်ထဲလဲ ရဲရင့်တတ်ရမယ် ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ကိုယ့်ဘာသာ မာန်တင်းရင်း ပြုတ်ကျတဲ့ဘဝကိုကိုယ့်ဘာသာပြန် ဆယ်ရင်း ကမ်းရောက်အောင်လက်ပြစ်ကူးနေ ကြသူတွေလဲ ရှိလိမ့်မယ် …. ။
ကိုယ်တွေ အားကိုးတကြီး ဆုပ်ကိုင်မိခဲ့တဲ့လက် တစ်စုံလွတ်ထွက်သွားတဲ့အခါ .. ဝရုန်းသုန်းကားပြိုလဲရင်းနစ်မွန်းနေမလား ၊ လဲကျတဲ့အခါအားမာန်အပြည့်နဲ့ မတ်မတ်ပြန်ထပြီး ကိုယ့်ဘဝကိုယ် အကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ရပ်တည်မလား ဆိုတာတော့ ကိုယ့်ရွေးခြယ်မှုပါပဲလေ ….. ။
( ဓာတ်ပုံလေးကြည့်မိပြီး တွေးမိတွေးရာရေး မိရေးရာမို့ လွတ်လပ်စွာသဘောထားကွဲလွဲနိုင်ပါတယ်) ( မူရင်းဓာတ်ပုံနဲ့သက်ဆိုင်သူများအားလုံး ကို လဲ လေးစားစွာcredit ပေးပါတယ်နော်)…..
ကျွန်တော့်တဦးထဲ အမြင်မှာတော့ ဒီပုံလေး မှာ ယုံကြည်မှုတွေပါတယ်၊ရဲရင့်မှုတွေပါတယ် နောက်ပြီး စွန့်စားမှုတွေလည်းပါတယ်… ဒါတွေအကုန်လုံး ဘယ်ကလာသလဲဆိုတော့ သူလှမ်းဆွဲလိုက်တဲ့ လက်တဖက် (သို့) အချစ်ဆိုတဲ့အရာကနေ လာတယ်လို့တော့ ထင်မိတာပဲ…
ဘယ်သူ့မှာ အပြစ်ရှိတာလဲ ဆရာတစ်ယောက် ၏ ဖြစ်ရပ်မှန်လေးပါ
ဖုန်းအားသွင်းတာ နဲ့ ပတ်သက်လို့ လူတိုင်း လုပ်တတ်ကြ တဲ့ အမှား အယွင်းများ
ခါးနာတာ ကြောကျကပျကွောငျ့လား ၊ အရိုး ၊ အကွော ကွောငျ့လား အလှယျ တကူ ခှဲခွားနညျး